အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်အပေါ် Inter-အမေရိကန်ကွန်ဗင်းရှင်း (အဆိုပါပနားမားကွန်ဗင်းရှင်း)
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်အပေါ် Inter-အမေရိကန်ကွန်ဗင်းရှင်း (အဆိုပါပနားမားကွန်ဗင်းရှင်း)
20/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဆိုပါ 1975 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်အပေါ် Inter-အမေရိကန်ကွန်ဗင်းရှင်း, ထို့အပြင် "ပနားမားကွန်ဗင်းရှင်း" အဖြစ်လူသိများ, အဆိုပါခုံသမာဓိအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာမလုံးကိုသတိထားမိသောတစ်သိသိသာသာဘက်ပေါင်းစုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းအားလုံးအားဖြင့်လက်မှတ်မှပွင့်လင်းခဲ့ 35 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၏အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ (အိုအေစစ်) နှင့်အပေါ်အင်အားသုံးသို့ ဝင်. 16 ဇွန်လ 1976.
19 နိုင်ငံပေါင်းနေ့စွဲဖို့ကွန်ဗင်းရှင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခဲ့ကြ, နှင့်ပြည်နယ်ပါတီအပြည့်အဝစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရရှိနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးများထဲမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်, အတွက်ကွန်ဗင်းရှင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ 1978 နှင့်သုံးသံသယနှင့်အတူကွန်ဗင်းရှင်းအတည်ပြု 1986.
အဘယ်အရာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ် Inter-အမေရိကန်ကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘက်တော်သားများ၏ပြဿနာသည်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး 1958 အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရေးအနုညာတဆုပေးပွဲ၏အာဏာတည်ခြင်းအပေါ်နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း (နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း).
နှစ်ဦးစလုံးသဘောတူညီချက်များတူညီသောကိစ္စရပ်များအားအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအမေရိကတိုက်အတွက်စတိတ်တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခဲ့ကြ. အချို့သောကိစ္စများများအတွက်တူညီသို့မဟုတ်အလားတူဖြေရှင်းချက်ပေးနေသော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ဘက်တော်သားငြင်းဆန်ခဲ့သည်စေခြင်းငှါအရာအပေါ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ်, တရားဝင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုနိုင်နှင့်ကိုဘယ်လိုအလားအလာပဋိပက္ခများကိုပြေလည်စေခြင်းငှါနှစ်ခုတွင်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များအရာနှင့်စပ်လျဉ်းထမြောက်တော်မူပြီ.
အလားအလာပဋိပက္ခဖြေရှင်းဖို့တစ်ခုမှာနည်းလမ်းလူသိများတဲ့မူအရဖြစ်နိုင် ကောလိပ်ရုပ်သိမ်း posteriori ဦး Lex, နောက်ပိုင်းဥပဒေဟောင်းတဦးတဦးတည်းရုပ်သိမ်းကြောင်းအဓိပ်ပာယျ, ဒါမှမဟုတ် lex specialis နိယာမ, အရာတိကျတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စအုပ်ချုပ်ပညတ္တိကျမ်းအထွေထွေဘာသာရပ်ကိစ္စအုပ်ချုပ်ကြောင်းဥပဒေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်ဆိုလိုသည်.
သို့သျောလညျး, ဤအသီအိုရီဖြေရှင်းချက်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်ခဲ့ကြ, အချို့နိုင်ငံများတွင်ဘက်တော်သားစစ်အစိုးရကိုပိုပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်မိမိတို့၏အမျိုးသားရေးခုံသမာဓိဆိုင်ရာဥပဒေများအတွက်သတ်မှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. ဥပမာတစျခုပနားမားရဲ့အနုညာတစီရင်ဥပဒမျှဖြစ်ပါသည် 131 ၏ 2013.
အဆိုပါပနားမားကွန်ဗင်းရှင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများဖန်တီးထားပါတယ်. အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများနှင့်ကွန်ဂရက်နှစ်ဦးစလုံးဟာပနားမားကွန်ဗင်းရှင်းနယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းထက် ကျော်လွန်. ကြာကြောင်းသတ်မှတ်လိုက်တဲ့, သို့သော်, တရားရုံးများမကြာခဏကွာကွန်ဗင်းရှင်းကနေခုတ်မောင်းနှင့်နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်အနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေပိုနှစ်သက် (FAA) ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရန်.
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးများမျှသာနယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း၏တစ်ဦးက extension အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်အပေါ် Inter-အမေရိကန်ကွန်ဗင်းရှင်းဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုဟန်, ယင်း၏သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေသော်လည်း.
နီနာတစ်ဦးက. Jankovic, Aceris ဥပဒေ SARL
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, ပနားမားအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်